ဉာဏ်ကောင်းသော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေး စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r နိုင် ဖြစ် အသုံးချ သို့ အဆိုပါ လြှောကျလှာ လိုအပ် အချိုးကျ ထိန်းချုပ်မှု, နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque နှင့် အကွာအဝေး ၏ 50N.m ~ 6000N.m.ကျွန်တော်တို့ ပေး လျှပ်စစ် actuaသို့rs ဘို့ အဆောက်အဦးများ, အပင်များ, steelworks, powerအပင်များ,etc. AOX ကွပ်မျက် အေဂျင်စီများ များမှာ ရရှိနိုင် သို့ နောက်ထပ် ထက် 30 နိုင်ငံပေါင်း။ ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ထုတ်လုပ် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကွပ်မျက် actuaသို့rs တွင် အနိမ့် စီးပွားရေး စျေးနှုန်းများ ဘို့ အဆိုပါ ဖြစ်nefit ၏ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers. ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ distribuသို့rs နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ ဖြစ်st ဝန်ဆောင်မှု။
2. Handwheel: လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ် actuator torque ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး, အင်အားစိုက်ထုတ်စစ်ဆင်ရေး။
AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်အစိတ်အပိုင်းအတွက် 3. လက်စွဲစာအုပ်အပေါ်မှထပ်လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်:
4. က Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting များကို: AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator settings ကိုနှင့်အမှားလှည့်အပေါငျးတို့သအလုံပိတ် display ကိုပြတင်းပေါက်မှတဆင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းကိုအသုံးပြုပြီး, အဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်သံလိုက်ဘူးသီးပြုနေကြသည်။ အဆိုပါ actuator အားလုံး setting များကိုနှင့်အမှား site ပေါ်တွင်လျှပ်စစ်အဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်မှု circuit ကိုဖော်ထုတ်မပါဘဲဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဆိုသည်အကြောင်းနှင့်ပြတင်းပေါက်များအကြားထိရောက်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအကွာအဝေး 1-1.5 မီတာဖြစ်ပါတယ်။
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကောင်းသောစီမံကိန်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ထားပြီးစတာတွေက high-tech ခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက် တက္ကသိုလ်များနှင့်သုတေသနဌာန၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပေါ်မှီခို Wenzhou တက္ကသိုလ်နှင့် Wenzhou အသက်မွေးမှုကောလိပ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအသိဉာဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator လှည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-မေးစီးရီးဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏နမူနာလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: ငါတို့သည်အသိဉာဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သင့်ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်